नाङ्गै Archives - ratoपिरो.com - Blog for Entertainment
दुनियाँ अचम्मको छ, कस्तो अनौंठो गाउँ जहाँ सबै जना नाङ्गै बस्ने गर्दछन् !!! (फोटोफिचर)
[wp_ad_camp_2] [wp_ad_camp_5] दुनियाँमा यस्ता धेरै ठाउँ छन् जुन भेषभुषा र संस्कृतिका लागि चिनिन्छन् । तर बेलायतमा यस्तो गाउँ पनि छ जुन गाउँका मानिस भेष भुषा नभएर नग्नताका लागि चिनिन्छन् । डेली मेलका अनुसार बेलायतको...
कस्तो अचम्म ! रातमा नाङ्गै बसेर स्तनको सहयोगमा संगितको सुर निकाल्छिन, यि गायिका
[wp_ad_camp_3] आफ्नो स्तनले संगितको सुर निक्लिन्छ भन्दा अलि विश्वास नलाग्न सक्छ । तर हलिउडकी गायिका रैपर केशाको एउटा अनौठो बानी छ । उनी आफ्नो स्तनले संगीतको सुर निकाल्छिन् । अर्थात उनी आफ्नो स्तनले पियानो बजाउने...